चुनावी वातावरण बनाउ (सम्पादकीय)
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक माहौल दिनप्रति दिन तातिदै गएको छ । एकातिर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका आमजनतामा बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्तापक्षले जहिले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउँदैछौं भन्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । काठमाडौं, ६ बैशाख । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा आन्दोलनरत् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि तीव्र हुँदै गएको छ । मधेशी मोर्चाले आफूहरू निर्वाचनको विरोधी नरहेको बताउँदै आएको छ । तर प्रमुख दलहरूले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको गुनासोहरू आउन थालेपछि बाध्य भएर मोर्चालाई पुनः गुहार्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रमूख पाँच राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा बसेको बैठकले निर्धा्रित मितिमै एकतावद्ध भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व नै मधेशी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउन वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, मधेशी मोर्चाले उठाएका माग र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकले बैशाख ३१ को निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न र मधेशी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र निर्वाचनका लागि थप अनुकूल वातावरण बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकार गठनपूर्व कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले मधेशी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे पालना नगरेसम्म मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बन्ने छैन ।
बाहिर जतिसुकै आश्वासन बाँडे पनि नेपालमा निर्वाचन हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई छ । मधेशमा निर्वाचन भएन भने त्यसले के सन्देश दिन्छ ? के मधेश नेपालबाट बाहिर हो ? के मधेशी मोर्चाका मागहरू नाजायज हो ? किन माग पूरा गर्न सकिरहेको छैन सकारले ? लगायतका प्रश्नहरू खडा भएको छ । यदि मधेश र पहाडमा अलग–अलग मितिमा निर्वाचन भयो भने मधेश नेपालबाट अलग रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान्छ । जुन नेपालको अखण्डताका लागि राम्रो होइन । तसर्थ, समग्र नेपालमा निर्वाचन हुने वातावरण तयार गर्नुको सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।